ကိုယျ့ကို မလိုအပျတော့ဘူးဆိုရငျ – Shinyoon
ကိုယျ့ကို မလိုအပျတော့ဘူးဆိုရငျ ပြောကျကှယျပဈဖို့ဝနျမလေးဘူး ။
တဈခါတဈလမှော . . .ကိုယျက လိုလိုခငျြခငျြရှိပမေယျ့ တဈဖကျက မလိုအပျမှနျးသိတဲ့အခါ ဘယျလောကျလိုခငျြနတေဲ့အရာကိုပဲ ဖွဈဖွဈ စှနျ့လှတျပဈလိုကျဖို့ဝနျမလေးပါနဲ့ ။ ကိုယျမမရရအောငျ ယူလိုကျ ပိုငျဆိုငျလိုကျရလို့လဲ ကိုယျပြျောရမယျ ကိုယျကနြေပျရမယျဆိုတာ မသခြောဘူးလေ ။ တဈခါတဈလကေရြငျ ကိုယျ့ဘကျက အရာအားလုံးကို ပေးပွီးတာတောငျ ကိုယျက ပြျောရတာမဟုတျဘူး ။
ကိုယျက မလိုအပျတဲ့အရပျမှာ အကွာကွီးရပျနရေငျ . . .ကိုယျကိုယျတိုငျ ပြောကျဆုံးသှားရတတျတယျ ကိုယျ့ဘ၀ရဲ့အိပျမကျတှေ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ . . .ဘာမှနျးမသိတော့ပဲ ကိုယျက အဓိပ်ပါယျမဲ့သကျသကျကွီး အသကျရှငျနရေတဲ့ ပုံစံမြိုး . . .ဖွဈသှားတတျတယျ ။ ကိုယျ့ကို မလိုအပျတဲ့အရပျမှာ နရေငျး ကိုယျ့တနျဖိုးကို ကိုယျကိုယျတိုငျ ခပြဈလိုကျတာမြိုးအဖွဈမခံပါနဲ့ ပွနျတှေးကွညျ့ရငျ မတနျဘူးလေ ။
ကိုယျဘယျလောကျပဲ ပေးပေးပါ တဈဖကျက ယူတတျဦးမှ . . .ကိုယျက ဘယျလောကျပဲ လိုခငျြလိုခငျြပါ တဈဖကျကလဲ ကွညျဖွူဦးမှ ကိုယျဘယျလောကျပဲ နခေငျြ နခေငျြ တဈဖကျကလဲ ကွိုဆိုဦးမှ အဆငျပွတောပါ ။
ကြှနျမမှာ ထိုကျသငျ့သလောကျ မာနတှရှေိပါတယျ ။ သုံးဖို့မလိုဘူးထငျလို့ဘေးခထြားခဲ့တာပါ ကိုယျ့ကို မလိုအပျမှနျး သသေခြောခြာသိလာတဲအခ မသုံးဖွဈခဲ့တဲ့ မာနတှေ ကြှနျမ ပွနျထုတျသုံးဖို့လိုလာပွီလေ ။ ကြှနျမ မှာလဲ ကိုယျ့တနျဖိုးနဲ့ ကိုယျရှိပါတယျ အဲ့ဒီတနျဖိုးဆိုတာကို နားလညျဖို့အရငျဆုံး ကိုယျ့ကို မလိုအပျတဲ့နရောကနေ လှညျ့ထှကျခဲ့ဖို့လိုတယျလေ အဲ့တာ ကြှနျမ မာနပဲ ။
နောကျဆို . . .ကိုယျ့ကို တကယျကော လိုအပျရဲ့လားဆိုတာ အရငျလလေ့ာပါ ။ ပွီးတော့မှ တှယျတာပါ ။ ကြှနျမက အရငျတှယျတာခဲ့ပွီးမှ ကိုယျ့ကို မလိုအပျမှနျးသိလာတော့ ပွနျပွီး လှညျ့ထှကျလာဖို့သိပျကို ခကျခဲ့တာလေ ။နာကငျြနရေဲ့နဲ့လဲ အနားမှာ နနေနေိုငျတာ ရှိနနေိုငျတာကိုပဲ ကနြေပျပွီး မကျြရညျတှကေပြွီး ပြျောနတေတျတာ ။
ကိုယျ့ကိုကိုယျလဲ မလိမျညာပါနဲ့ . . . .ကိုယျ့နှလုံးသားက သူ့ကို လိုအပျနပေမေယျ့ ကိုယျ့ ဦးဏှောကျက သူငါ့ကို မလိုအပျပါလားဆိုတာ သိလာတဲ့အခါ . . .တဈနကေ့ရြငျတော့ ကိုယျစတေနာတှေ မွငျလာမှာပါဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မလိမျညာပါနဲ့ အစကတညျးကနေ လိုအပျနခေဲ့ရငျ ကိုယျ ဒီလောကျထိ နာကငျြနမှောမဟုတျပါဘူး ဒါကို လကျခံရဲဖို့လိုတယျ
ကြှနျမကို မလိုအပျတော့ဘူးဆိုတာ သခြောသှားတဲ့အခါ ကြှနျမ ပြောကျကှယျသှားဖို့ဝနျမလေးတော့ဘူး အဲ့တာ ကြှနျမ မာန ပါ ။
ကိုယ့်ကို မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင် ပျောက်ကွယ်ပစ်ဖို့ဝန်မလေးဘူး ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ . . .ကိုယ်က လိုလိုချင်ချင်ရှိပေမယ့် တစ်ဖက်က မလိုအပ်မှန်းသိတဲ့အခါ ဘယ်လောက်လိုချင်နေတဲ့အရာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ ။ ကိုယ်မမရရအောင် ယူလိုက် ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရလို့လဲ ကိုယ်ပျော်ရမယ် ကိုယ်ကျေနပ်ရမယ်ဆိုတာ မသေချာဘူးလေ ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ့်ဘက်က အရာအားလုံးကို ပေးပြီးတာတောင် ကိုယ်က ပျော်ရတာမဟုတ်ဘူး ။
ကိုယ်က မလိုအပ်တဲ့အရပ်မှာ အကြာကြီးရပ်နေရင် . . .ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပျောက်ဆုံးသွားရတတ်တယ် ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့အိပ်မက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ . . .ဘာမှန်းမသိတော့ပဲ ကိုယ်က အဓိပ္ပါယ်မဲ့သက်သက်ကြီး အသက်ရှင်နေရတဲ့ ပုံစံမျိုး . . .ဖြစ်သွားတတ်တယ် ။ ကိုယ့်ကို မလိုအပ်တဲ့အရပ်မှာ နေရင်း ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ချပစ်လိုက်တာမျိုးအဖြစ်မခံပါနဲ့ ပြန်တွေးကြည့်ရင် မတန်ဘူးလေ ။
ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ ပေးပေးပါ တစ်ဖက်က ယူတတ်ဦးမှ . . .ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲ လိုချင်လိုချင်ပါ တစ်ဖက်ကလဲ ကြည်ဖြူဦးမှ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ နေချင် နေချင် တစ်ဖက်ကလဲ ကြိုဆိုဦးမှ အဆင်ပြေတာပါ ။
ကျွန်မမှာ ထိုက်သင့်သလောက် မာနတွေရှိပါတယ် ။ သုံးဖို့မလိုဘူးထင်လို့ဘေးချထားခဲ့တာပါ ကိုယ့်ကို မလိုအပ်မှန်း သေသေချာချာသိလာတဲအခ မသုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မာနတွေ ကျွန်မ ပြန်ထုတ်သုံးဖို့လိုလာပြီလေ ။ ကျွန်မ မှာလဲ ကိုယ့်တန်ဖိုးနဲ့ ကိုယ်ရှိပါတယ် အဲ့ဒီတန်ဖိုးဆိုတာကို နားလည်ဖို့အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကို မလိုအပ်တဲ့နေရာကနေ လှည့်ထွက်ခဲ့ဖို့လိုတယ်လေ အဲ့တာ ကျွန်မ မာနပဲ ။
နောက်ဆို . . .ကိုယ့်ကို တကယ်ကော လိုအပ်ရဲ့လားဆိုတာ အရင်လေ့လာပါ ။ ပြီးတော့မှ တွယ်တာပါ ။ ကျွန်မက အရင်တွယ်တာခဲ့ပြီးမှ ကိုယ့်ကို မလိုအပ်မှန်းသိလာတော့ ပြန်ပြီး လှည့်ထွက်လာဖို့သိပ်ကို ခက်ခဲ့တာလေ ။နာကျင်နေရဲ့နဲ့လဲ အနားမှာ နေနေနိုင်တာ ရှိနေနိုင်တာကိုပဲ ကျေနပ်ပြီး မျက်ရည်တွေကျပြီး ပျော်နေတတ်တာ ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ မလိမ်ညာပါနဲ့ . . . .ကိုယ့်နှလုံးသားက သူ့ကို လိုအပ်နေပေမယ့် ကိုယ့် ဦးဏှောက်က သူငါ့ကို မလိုအပ်ပါလားဆိုတာ သိလာတဲ့အခါ . . .တစ်နေ့ကျရင်တော့ ကိုယ်စေတနာတွေ မြင်လာမှာပါဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလိမ်ညာပါနဲ့ အစကတည်းကနေ လိုအပ်နေခဲ့ရင် ကိုယ် ဒီလောက်ထိ နာကျင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါကို လက်ခံရဲဖို့လိုတယ်
ကျွန်မကို မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတာ သေချာသွားတဲ့အခါ ကျွန်မ ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ဝန်မလေးတော့ဘူး အဲ့တာ ကျွန်မ မာန ပါ ။
မြှျောလငျ့ခငျြသေးပမေယျ့ မြှျောလငျ့ရဲတဲ့ သတ်တိတှတေော့ တကယျ မရှိတော့ဘူး